FANAFIHANA TANY BELON’I TSIRIBIHINA : Mpiasan’ny paositra very vola efatra sakaosy
Raha nangingina ny fanafihan-jiolahy tao anatin’ny Distrikan’i Belon’i Tsiribihina dia niverina nipoaka indray izany afak’omaly vao mangiran-dratsy. 8 juillet 2017
Noraofin’ireo olon-dratsy nandritra ny fandrobana ny vola efa ho efatra sakaosy tao an-tranon’ny mpiasan’ny paositra.
Nitrangana fanafihana mitam-basy teo an-tampon-tanànan’i Belo ambonin’i Tsiribihina ny alakamisy maraina lasa teo. Tokantranona mpiasan’ny paositra tao an-toerana no lasibatra. Nanao andiany maro ireo olon-dratsy, raha ny loharanom-baovao voaray. Nangina ny tanàna, mbola tao anatin’ny torimasony ny mponina no nanararaotra nanao ny asa ratsiny ireo jiolahy nirongo fitaovam-piadiana toy ny basy sy zava-maranitra.
Nopoirin-dry zalahy avy any ivelany ny varavaramben’ny trano ka tamin’izay no nahafahan’izy ireo niditra tao anatiny. Ny raim-pianakaviana tompon-trano niaraka tamin’ny vady aman-janany no novantanan’ireo olon-dratsy tamin’io fotoana io. Vavam-basy no avy hatrany dia niatrana teo an-tampon-dohan’izy ireo ka tsy nisy sahy nihiaka na nanohitra ireto lasibatra. “Andian-jiolahy marobe no nanafika, tafiditra tao an-trano izy ireo vao taitra mafy izahay. Nambanany tamin’ny basy izahay mba tsy hisy hanohitra na hiantso vonjy”, hoy ny fitantaran’ilay raim-pianakaviana. Notereny ilay rangahy hanoro ny toerana misy ny vata fitoeram-bola. Tsy nisy afatsy ny vola ihany no nalain’ireo mpanafika nandritra ny fandrobana.
Vola nifatratra tao anaty sakaosy miisa efatra no indray nobatain’ireo jiolahy. Tsy nisy kosa ny maty na ny naratra fa rehefa nahazo izay notadiaviny ry zalahy dia vaky nitsoaka. Fanafihana efa maty paika sy tsara lamina no niseho, ary efa fantatr’ireo olon-dratsy ny fisian’ny volabe tao amin’ity raim-pianakaviana voatafika.
Mandeha ny fikarohana sy ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana.